December 2021 - MM Daily Life
ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့မိခင် ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ပြောပြလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ယူသွားတဲ့အလုပ်သမားတွေအကြောင်းစုံ
December 31, 2021 by MM Daily Life
ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့မိခင် ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ပြောပြလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ယူသွားတဲ့အလုပ်သမားတွေအကြောင်းစုံ အနုပညာလောကထဲမှာ ဇာတ်ပို့တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျရာနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဖူးပွင့်သခင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကို ခိုင်မာစွာ ရယူထားနိုင်သူလေး ဖြစ်ပါတယ်နော်. သူမကတော့ ခုနောက်ပိုင်းမှာ အနုပညာ အလုပ်တွေကို သိပ်မလုပ်တော့ပေမဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်သွယ်မပြတ်အောင်တော့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်နော်.. သရုပ်ဆောင် ဖူးပွင့်သခင်ဟာ မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းလောက်က သူမရဲ့နေအိမ်ဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်အိမ်လုံးကို စိတ်ကြိုက် မွှေနှောက်ယူဆောင်သွားခံခဲ့ရတဲ့အတွက် ဖူးပွင့်သခင်တစ်ယောက်အတော်လေးကို စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခက်ကပဲ တရားခံတွေကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းများအားလုံး ခိုးသွားခဲ့တဲ့အပြင် ရစရာမရှိအောင် ပြောဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်ခံခဲ့ရတဲ့ သူမရဲ့အဖြစ်ဆိုးကို ဖူးပွင့်သခင်နဲ့မိခင်က ဗီဒီယိုတင်ပြီး ပြောပြလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. Fans Myay Ni Lan ပရိသတ်ကြီးလည်း ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့မိခင်ပြောပြချက်ကို နားထောင်ပြီး … Read more
ပြာသိုလအတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ (2.1.2022) မှ ပြာသိုလကွယ်(31.1.2022)အထိ
ပြာသိုလအတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ ပြာသိုလဆန်း(၁)ရက်နေ့ (2.1.2022) မှ ပြာသိုလကွယ်(31.1.2022)အထိ တစ်လတာလုံး “​အခွံချွတ်ထားပြီးသား အုန်းသီးခြမ်း အတွင်းထဲတွင် နှမ်းအဖြူ အပြည့်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။တုတ်ချောင်း၊တူချောင်းလေးကို အသုံးပြု၍ အလံတိုင် သဖွယ် ပြုလုပ်ပြီး အလံစက္ကူပေါ်တွင် ” ဧ” ဟူ၍ ဆော့ပင်အနီ‌ရောင်ဖြင့် သေချာ ရေးပေးလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် ထိုအလံတိုင်လေးကို နှမ်းများတွင် စိုက်၍ထောင်ပေး ထားရပါမယ် ခင်ဗျ။ ဤယတြာကို ဘုရားကျောင်းဆောင် ပေါ်သို့တင်၍ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား‌ လှူဒါန်းပေး‌ထားရပါမည်။ ယခုလတစ်လတာတွင် အုန်းရည်တစ်ခွက်(သို့)အုန်းသီးစိပ်တစ်ပန်းကန် ကိုနေ့စဥ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ကပ်ပေးနေခြင်းဖြင့်လည်းမိမိအတွက်ထူးခြားမှူဖြစ်စဥ်များကောင်းကျိုးများစွာကိုလည်း ရရှိခံစား‌နေရမည်ဖြစ်သည်။ ကံချေကန်တော့ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့ရန် မမေ့ပါနှင့်။ နေ့စဥ်အောက်ဖော်ပြပါဂုဏ်တော်များကိုရွတ်ဖတ်ပါ။* ဣတိပိသောဘဂဝါ ဗုဒ္ဓေါ =၆ခေါက် ဣတိပိသောဘဂဝါ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော=၁၇ခေါက် ဣတိပိသောဘဂဝါ သုဂတော=၁၀ခေါက် ‌ပြာသိုလနေ့စဥ်လာဘ်ပွင့်အရပ်မျက်နှာများ တနင်္ဂနွေနေ့=မြောက်အရပ် တနင်္လာနေ့=တောင်အရပ် အင်္ဂါနေ့=အရှေ့အရပ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့=အ‌နောက်အရပ် … Read more
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ရွာတစ်ရွာက ဗိုလ်အောင်ဒင် ဇာတ်လမ်း …
ဗိုလ်အောင်ဒင်ဆိုတာ တစ်ချိန်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်မတန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အသံဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်၊ အကြမ်းအရမ်း နဲ့ လူ့လောကသရုပ်ကို ဖော်ကြူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပီး ကောလိပ်ကျင်နေဝင်းက ဗိုလ်အောင်ဒင်အဖြစ် အသံသွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်းရဲ့ အင်မတန်အသရုပ်ပါ သြဇာပြည့်တဲ့ အသံသရုပ်ဆောင်မှု့ကြောင့် ဒီနေ့ထိတိုင်မရိုးနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ ရွာတစ်ရွာက ပွဲတစ်ခုမှာ လူငယ်တွေ ဗိုလ်အောင်ဒင်ပြဇာတ်ကို သရုပ်ဆောင်ပီး ဖျော်ဖြေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပီး အရမ်းရီနေရပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း ဒီဗွီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပီး ဘဝအမောတွေပြေပျောက်ကြပါစေဗျာ။ မင်းသားမင်းသမီးတွေမဟုတ်ဘဲ ရပ်ထဲရွာထဲ အပျော်သက်သက် ဝါသနာအရသရုပ်ဆောင်ကြတာဖြစ်လို့ လိုအပ်ချက် အားနည်းချက် အမှားတွေပါရင်လည်း ဟာသအမြင်လေးနဲ့ သည်းခံပီးကြည့်ကြပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်နော်။ Credit to Original Zawgyi ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ဆိုတာ တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အင္မတန္နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ အသံဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါတယ္။ အခ်စ္၊ အၾကမ္းအရမ္း နဲ႔ လူ႔ေလာကသ႐ုပ္ကို ေဖာ္ၾကဴးထားတဲ့ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပီး … Read more
ယာဉ်မောင်းသူတွေအနေနဲ့ မိမိကားရဲ့ ဘရိတ်စနစ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို သိရှိထားဖို့ ဖြစ်ပါ တယ်။(၁)ဘရိတ်နင်းတဲ့အခါ တစ်ဖက်ဆွဲသွားတာ – ကားကို တစ်နာရီ ၂၀ မိုင်နှုန်း အထက် မောင်းနှင်ရင်း ရပ်တန့်ဖို့ ဘရိတ်နင်းလိုက်တဲ့အခါ ကားဘီးတွေက အခြား ဦးတည်ရာဘက်ကို ဆွဲသွားတာမျိုးပါ။ ဘရိတ်ရဲ့ သက်ရောက်မှုက ကားကို ဆန့်ကျင်ဘက် အရပ်ဆီ ဆွဲသွားစေတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါ က ဘရိတ်ရဲ့ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်မှာ ပြဿနာရှိနေပြီဆိုတာ သတိပေးလိုက်တာပါ။ (၂)ဘရိတ်လိုင်းတွေရဲ့ ပြဿနာ – ရပ်တန့်နိုင်ဖို့အတွက် ဘရိတ်ကို ပြင်း ပြင်းထန်ထန်ဖိနင်းနေရပြီဆိုရင် ဘရိတ် လိုင်း (brake lines)တွေ ပိတ်ဆို့နေတာ ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘရိတ် လိုင်းတွေကို စစ်ဆေးပြီး ပျက်စီးတာ၊ ကျိုး … Read more
မိုးလေဝသပညာရှင် မစုစုစံရဲ့ နှစ်သစ်ကူး မိုးခန့်မှန်းချက်…
Happy New Year in Myanmar ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီလ ၁ရက်နေ့တွေမှာ ကယားပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသတွေမှာ မိုးဖွဲလေးများရွာသွန်းနိုင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတွင်မိုးအသင့်အတင့်ရွာနိုင်ပါတယ် ကျန်တစ်နိုင်ငံလုံး New Year မှာသာသာယာယာရှိပါမယ် 2022 မိုးရာသီအတွက် လိုအပ်သော weather data အချက်အလက်များစွာကို ဝယ်ယူနေပါတယ် မကြာမှိရက်အတွင်း မင်းဂွတ်သီးလေးရဲ့ Lonk kick များကို တင်ပေးသွားနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် အများပြည်သူအကျိူး တောင်သူလယ်သမားများ စိုက်ပျိုးရေးသမားများ နှင့် ရာသီဥတု မိုးလေဝသကို တည်မှိလုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် ကိုယ်ကျိုးမဖက် အားကျိုးမာန်ထက်လုပ်ဆောင်သွားပါမယ် 30/12/2021 ရက်နေ့ ဧရာဝတီတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်း မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် တွေမှာ မိုးတိမ်မိုးသားဖုံးအုပ်မှုရှိနိုင်သော်လည်း ပျက်စီးမိုးဖျက်မိုးရွာနိုင်ဖွယ်မရှိပါဘူး တစ်ချို့ဒေသတွေမှာ မိုးဖွဲလေးများရွာနိုင်သဖြင့် ဆောင်းသီးနှံအပင်အားတိုးမိုးဖွဲလေးများသာဖြစ်မှာပါ ခန့်မှန်းချိန် … Read more
ရောင်းအားကျနေတဲ့ဆိုင်ကို တစ်ညတည်းနဲ့ ရောင်းအား (၄)ဆတက်စေခဲ့တဲ့ မိန်းမလှလေး
မိန်းမလှလေးတစ်ယောက် အသားဆိုင်မှာဈေးရောင်းနတဲ့ ပုံတွေ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေပါတယ်။ ဘောင်းဘီအတိုလေးနဲ့ အပေါ်ပိုင်းရင်သားကို မလုံ့တလုံဖော်ပြထားတဲ့ မိန်းမလှလေးက အသားရောင်းနေပြီး ဆိုင်မှာတော့ ဝယ်သူတွေနဲ့ စည်ကားနေတဲ့ ပုံလေးတွေပါ။ ထိုင်ဝမ် Taichung ညဈေးက လမ်းမတစ်ခုပေါ်က ပုံတွေပါ။ ထိုင်ဝမ်လမ်းဘေးဈေးသည်တစ်ဦးက ရောင်းအားကျနေတဲ့ သူ့ရဲ့ ဆိုင်ကို ရောင်းအားပြန်တက်အောင် ဗျူဟာခင်းတဲ့အနေနဲ့ ချောမောတဲ့ မော်ဒယ်မိန်းမလှလေးကို ငှားခဲ့တာပါ။ တစ်ညဈေးရောင်းပေးဖို့ ငှားခဲ့တာပါ။ တကယ်လည်း ရောင်းအားကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်ရောင်းအားထက် လေးဆလောက် ပိုရောင်း ခဲ့ရပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့ ရောင်းအားတက်ဖို့ တကယ့်ကို မှန်ကန်တဲ့ ဗျူဟာကို သုံးခဲ့တာပါ။ ဆိုင်ပိုင်ရှင် အမျိုးသားက ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ် သက်ပြီး ထိုင်ဝမ်မီဒီယာတစ်ခုကို ပြောရမှာ “ဒီမိန်းကလေးကို ဈေးရောင်းစေခဲ့တဲ့ အခါမှာတော့ စူးစမ်းချင်တဲ့ ဈေးဝယ် … Read more
သရ ဏဂုံ သုံးပါး ကို အမြဲမပျက် ရွတ်ဆိုပွား များသော ပုဂ္ဂိုလ် တို့ ရရှိနိုင်သော အကျိုး တရားများ
သရ ဏဂုံ သုံးပါး ကို အမြဲမပျက် ရွတ်ဆိုပွား များသော ပုဂ္ဂိုလ် တို့ ရရှိနိုင်သော အကျိုး တရားများ မိမိ ၏ အဆွေ ခင်ပွန်း များကို မည်သူကမျှ ပျက်စီးအောင် မပြုလုပ်နိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးတရားတို့ဖြင့် ပြည့်စုံနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် … အလွန်အလုပ်များ၍ တရား အားထုတ်ရန်အတွက် အချိန်မရသော သူများသည် သရဏဂုံ သုံးပါးကို အမြဲမပြတ် ရွတ် ဆိုပွားများသင့်ပါသည်။ သရဏဂုံ သုံးပါးကို အမြဲမပျက် ရွတ်ဆိုပွားများသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် အောက်ပါ အကျိုးတရားများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၁။ ဒိ သာသု ပူဇိတော ဟောမိ။ သွားလေရာ အရပ်တိုင်း ၌လေးစားမြတ်နိုးခြင်းခံရမည် ၂ ။ တိက္ခပညော။ ဉာဏ်အလွန်ထက်မြက်မည်။ ၃။ … Read more
ညဘက္တိုင္း ေခြးေတြေဟာင္ေနလို႔ CCTV တပ္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ…
ဒါကြောင့် သူဟာ CCTV ကင်မရာတပ်ပြီး စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ မယုံကြည်နိုင်စရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သူ့ကင်မရာမှာ ကျားသစ်တစ်ကောင်ကို မြင်လိုက်ရတာပါပဲ။ ကျားသစ်ဟာ ညအချိန်မှာ သူ့နွားဆီကို ရောက်လာတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ထင်နေကြသလို နွားကို စားဖို့ လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ CCTV မြင်ကွင်းမှာ နွားဟာ ကျားသစ်ကို လျှာနဲ့ လျက်ပေးနေပြီး ကျားသစ်ကလည်း ငြိမ်ငြိမ်လေး ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နွားပိုင်ရှင်က အရင်နွားပိုင်ရှင်ကို မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ အကြောင်းစုံကို သိခဲ့ရပါတယ်။ ကျားသစ် ကလေး ရက် ၂၀ သားအရွယ်မှာ အမေဖြစ်သူ သေသွားခဲ့တာကြောင့် နွားမကြီးက သူ့ကို မိခင်သဖွယ် နို့ချိုတိုက်ကျွေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ ကျားသစ်လေးဟာ နွားမကြီးကို … Read more